भैगो दिनु पर्दैन [कथा] ‘तिम्री स्वास्नी र म’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
भैगो दिनु पर्दैन [कथा] ‘तिम्री स्वास्नी र म’
ए खर्दारनी बजै ! आउनुस् आउनुस्, कताबाट ?
आफ्नो भताभुङ्ग कोठामा बसेर खरदार सुन्दैछ र आफ्नो जनैको जुम्रा विक्षुब्ध भएर मार्दैछ । आफ्नो नङलाई नङ्ग्रा सम्झने भूल गर्दैछ जसले जुम्राबाहेक अरु केही मार्न सकेन (न आफ्नो अभाव, न अर्काको प्रभाव, न भोक, न शोक । ऊ झ्यालबाट देख्छ, खरदारनी बजै (ऊ आफू खरदार भैटोपलेकोले) पल्लो घर पोर्टिकोमा उभिएकी रहिछ । चाइजिन इँटको रातो बंगलाभित्रैबाट घन्किँदै रहेछ ।
बाहिर किन ? भित्र आउनुस् ।
खरदारनी बजै (जो यो माघदेखि पच्चिस पुगेर छब्बीस लागी) भित्र पसी । बङ्गलाका मालिक (जो चालीस पुगेर अझै माथि उक्लिसकेका छन् र पक्कै पनि बजैका नाति होइनन्)हिटरनेर बसेर आह्वान गर्दैछन् ।
नातिसामु बजै खुम्चेर सोफामा बस्छिन्। बस्दा कतै पनि बिझाउँदैन, जसरी खरदार बाजे बिझाउँछन् । रन्केको हिटरसामु पनि माघको जाडो बिझाउँछ, सँगसँगै संकोच पनि बिझाउँछ । उत्सुक र प्रसन्न नातिको अनुहार मुख हुन्छ ।
अघि हरिहर साहुले घरमा आएर लोग्नेलाई बेइज्जत नगरेको भए ऊ यहाँ आउने थिइन । घरमै बसेर पनि के गर्नु ? यत्रा यातायातका साधन हुँदाहुँदै कहीँ न कहीँ, कतै न कतै, कसैकहाँ त हात थाप्न जानैपर्थ्यो । तिरौँला भन्ने लोग्ने र स्वास्नीको संयुक्त अठोटले गर्दा ऊ यहाँ पाँचौ पटक पनि आउन सकेकी हो । वरिपरिका अन्य ठाउँहरुमा ‘पटकहरु’ गन्न अहिले सकिराखेकी छैन । यति बेइज्जति प्राप्त भइसकेपछि अब केही दिनका लागि हरिहर साहुतिर निश्चिन्त भए हुन्छ । तर वर्तमान त काखमै छ, फुल्याउनु कि रुवाउनु ? फुल्याउनै पर्‍यो ।
ए अँ, अलिकति घरायसी किनमेल थियो ‘यहाँसित’..
फेरि बिझायो, सोफा होइन, संकोच । पाँच पटकमा पाँच वटा तगारा । सबै तगाराहरु एकैचोटी फड्किन कति गाह्रो !
अहिलेलाई गोडा पच्चिसेक भएँ ।
ऊ तगारोतिर अचम्म मानेर हेर्छे, बुरुक्कै फड्किसकिएछ ।
ल लिनुस्, अँ, खरदार बाजेलाई भन्नुहोला यसो सिमन्टी पत्तो लगाइराख्ने भनेर। ग्यारेजमा काम छ ।
हजुरलाई पछिको पनि हिसाप दिनु छ ।
भो–भो दिनुपर्दैन, काम चलाउनुस् । यो त मैले हिजो पप्लुमा जितेको ।
ऊ दातातिर हेर्छे । दाता विधाता झैँ टुलुटुलु ऊतिरै हेर्दै रहेछन् । ऊ झस्केर हातको जिताउरी पट्याउन थाल्छे । ‘दिनुपर्दैन’ ले धेरै कुरा लिन खोजेजस्तो लाग्छ। के( के ? विवरण प्रष्ट छैन । अस्पष्टताले कुनै अन्यौलमा पार्दैन।
बुझेर नबुझ्नुलाई नै व्यवहारिकता भन्दछन् । आदर्श ज्ञान र व्यवहारिक अज्ञानको रेखा कहीँ न कहीँ गएर अवश्य काटिएला र एउटा कुनो (कोण) बनाउला । यी दुवै कहिल्यै समानान्तर हुँदैनन् । एक न एक दिन ज्ञानले अज्ञान भेट्टाउँछ र अज्ञानले ज्ञान । अनि भेट हुने कुनामा पप्लु चल्छ । एउटा हार्छ, अर्को जित्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस यस्तो थियो लडाकु भत्ताकाण्ड, यसकारण अख्तियारको छानबिन अलपत्र पर्यो
ऊ हातको जिताउरी अभ्यासवश चोलोमा हाल्न खोज्छे तर विधाता सामु हुनाले यसो गर्न सक्तिन । स्वास्नीमान्छेले ‘सम्पति’ कि त चोलोमा हाल्नुपर्ने, कि त पेटिकोटमा । के यस्तो चलन होला ? लोग्नेमान्छेका भने जताततै गोजी नै गोजी छन्। यो सोचेर उसलाई झर्को लाग्छ । जिताउरीलाई हत्केलामा जोडसित अँठ्याउँछे। अब समापन भाषण पनि त हुनुर्पयो । ऊ भन्छे ।
यस्तो संकटमा पनि हजुरले यति गुन ।
आऽऽ केको गुन ? फेरि पनि र्साहो र्गाहो परे आए हुन्छ नि !
हस् नमस्कार ! अनुहार झन् उज्यालो छ ।
घरमा आउँदा दुवै छोरा पाठ घोक्दै रहेछन् । लोग्ने खुइलिएको जर्किनमा ठुटो खोजेर धुवाउँदै रहेछ। लोग्ने र छोराहरुलाई देखेर उसले विधातालाई बिर्सी र समस्या समाधानको उज्यालो मुखले हाँसी
दियो, पच्चिसवटा। यति नै माग्ने भनेको होइन ?
खोलामा हैन अफिसमा क्या । कस्ती लाटी रैछ। बाठो लोग्नेले लाटी स्वास्नीलाई कुरा बुझायो ।
अलि ठूलो माछा पारे पो। कैलेकाहीँ पार्नुहुन्छ । त्यै पनि बुदुना र भोटी ।
असला पर्छ क्या असला । अनि त्यो हरिहरेको मुखमा बुजो ठोकौँला ।
असला कत्रो हुन्छ र ? त्यै हरिहरेको मुखमा पनि नअटाउला। मदिसे रहु पारे पो अलिक दिन ढुक्क होला ।
तेरो खर्दारको मात्रै मुख छ, हैन ? अफिसमा त अरु छँदै छैनन् ? जतो जाल त्यत्रै माछा ।
छोराहरु माछाको प्रसङ्ग सुनेर पाठ बिर्सन्छन् ।
ठूलो छोरो, एफ आई एस एच फिस्, फिस् माने माछा ।
चूप लाग, पढ्नु सढ्नु छैन । पढ् बसेर ।
दुवै एक साथ भन्छन् र बेग्लाबेग्लै झर्किन्छन्। अनि आफ्नो कुराको प्रसंग सम्झेर दुवै फेरि मुखामुख हुन्छन् ।
त्यो आएपछि म एउटा सारी किन्छु ल ? बाहिर निस्कन पनि लाजमर्नु भैसक्यो। ऊ झल्याँस्स विधातालाई सम्झिन पुग्छे ।
अनि सम्झिएरै फेरि भन्छे, उनले यी रुपैयाँ फर्काउनु पर्दैन भनेका छन् ।
कुन्नि ? पप्लुमा जितेका रे, दिनु पर्दैन ।
ऊ घोरिएर स्वास्नीतिर हेर्न थाल्छ । भनिसकेपछि ऊ पनि झस्केर लोग्नेतिर हेर्न थाल्छे । आफ्नो सारी किन्ने हिसाबको तानामाना मिलार्न खोज्दा उसको सुद्धि हराएछ (यसोभन्दा कसो पर्ला भनेर । ऊ देख्छे, लोग्नेको आँखामा परम्परागत पुरुष ठिङ्ग उभिएको रहेछ । ऊ छोराहरुतिर हेरेर सहज हुन खोज्छे ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रहरी कार्यालयको हिरासतबाट एक थुनुवा फरार
घर व्यवहार भएको मान्छे माग्ने हुँदैन । अनि सापटी लिने चलन नौलो पनि होइन । सापटी लिने परम्परामा सकभर सापटी फर्काउने चलन पनि छैन (गाउँघरदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्म । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसले कसको सापटी फर्काएको छ र ? बरु त्यसको सट्टा केही भित्री कुरा गए जाओस् । भित्री कुरा गएको कसले देख्छ र ? आफूले मात्र बुझिन्छ, जानिन्छ, अनुभव महसूस गरिन्छ । बुद्धि बढेर आउँछ। बुद्धत्वले छुन (छुन आँट्छ । कन्तुरको इज्जत कन्तुरमै रहन्छ । माग्ने त भइँदैन ?
एसएलसी पास गरेर अखबार पढेको बुद्धिले यति तर्क गरेपछि ऊ टोलाइराखेको स्वास्नीतिर फर्केर फेरि सोध्छ, अघिभन्दा किञ्चित् कठोर स्वरमा (हामी माग्ने त होइनौँ ?
स्वास्नी दलिनभित्ता हेर्दैछ । उसलाई थाहा छ, यो लोग्नेमात्र होइन, लोग्नेमान्छे पनि हो। बहस गर्नु व्यर्थ छ । बरु झोला बोकाउनु बेस । अनि बल्ल खाली झोलाको शून्यमा लोग्नेमान्छे हराएर झोला बोकेको लोग्ने चतुर्भुज विष्णु झैँ ठिङ्ग उभिनेछ ।
उनको भन्ने काम, भने । फर्काइदिउँला । ल, यो झोला लेऊ । यी रुपियाँ पनि । दुई किलो चामल, दाल होला, साबुन छैन, तरकारी आफूलाई चुरोट पनि ल्याउनू । कति ठूटो खाएको ? नखानू भन्छन् । टीबी हुन्छ रे ।
झोला हातमा परेपछि उसले पनि परिस्थिति बुझ्यो । तिर्छु भनेपछि मन कत्रो भएर आउँछ ! बुझ्ने होइनन् यिनीहरु । उसले खाली झोलाको झटारोले खाटमा उक्लिँदै गरेको साङ्लोलाई हिर्कायो ।
ए, अँ सिमन्टी खोजिदिनू भन्थेँ ।
बाठो लोग्नेले फेरि कुरा बुझ्यो र चूप लाग्यो ।
चूप लागेपछि गुम्सियो र रन्थनिँदै झोला बोकेर बाहिरियो ।
भएन, हुँदै भएन। ठ्याम्मै हिसाब मिलेन। बरु पचास माग्नुपर्ने रहेछ। के थाहा यति सजिलै पाइएला भन्ने। नत्र कसरी आदर्शवादीहरुले भौतिकवादीहरुसित रुपियाँ खुस्काउँछन् कुन्नि ?
थाप्लोमाथि गुलुप रहेछ, राति बल्ने। अहिले त सूर्य बलिराखेको छ( झलमल्ल। प्रकाश आँखासम्म आइपुग्छ, भित्र पस्दैन। त्यहीँबाट रिफ्लेक्ट भएर चारैतिर छरिन्छ र सबै कुरा देखिन्छ। देख्छ, बीस रुपैयाँ घरखर्च( जतिसुकै आओस् र पाँच रुपैयाँ आफ्नो गोजीमा। माछा समात्न अफिस पनि त पुग्नुछ। यसरी माछाको निहुँको हिसाबले आफूलाई सन्तुष्ट पारेपछि ऊ ल्याम्पपोस्टको छायाबाट अगाडि लम्कन्छ। यति वैज्ञानिक ढंगले त उसको अफिसको एकाउन्टेन्टले पनि अडिटरलाई सन्तुष्ट पारेको थिएन होला। अडिटर र ऊ सन्तुष्ट हुने एउटै गाँठी त हो (गोजीमा पाँच रुपियाँ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्मल निवास किन छिरे उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर ?
‘बाजे’ले उसलाई झस्काएर ‘नाति’ छेउ र्पुयाउँछ। नाति झैँ मुसुक्क हाँसेर रवाफिलो स्वरमा अर्थपूर्ण दृष्टि दिँदै भन्छ, भैगो, दिनुपर्दैन।
(तिम्री स्वास्नी र म कथा संग्रहबाट)
१८,चैत्र.२०७४,आईतवार ०७:०० मा प्रकाशित
← आजको राशिफल
२३ वर्षका प्रचण्डले ४० वर्ष अघि लेखेको एउटा पत्र →